I-Old Town Charm kunye neNdawo esembindini eRapperswil
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguImee & Daniel
Ifakwe kumbindi weDolophu eNdala enomtsalane yeRapperswil, umgama oyimizuzu emi-3 ukusuka kwisikhululo sikaloliwe, kwaye kanye ecaleni kweLake Zurich (iimitha ezingama-50) eneendawo zokutyela ezinkulu ezisecaleni kwechibi, imbonakalo yechibi elibonakalayo, kunye neevenkile ezikufutshane zenza indawo yethu ibe yindawo entle yokuya. IZurich luhambo lwemizuzu engama-35 kuphela kuloliwe - rhoqo ngemizuzu eli-15 imini yonke kude kube sebusuku. Indawo yokuhlala inefenitshala enesitayile, ibhedi enkulu epholileyo ephindwe kabini, igumbi lokuhlambela kunye nekhitshi. I-WIFI yasimahla, iNetflix kunye neTV.
Indawo yethu ijikelezwe ziikhefi ezintle, iivenkile kunye neendawo zokutyela, kunye neRapperswil's gorgeous lake promenade.
Indawo yokuhlala ibonelela ngomatshini weNespresso, ifriji, isitovu sokupheka kunye nezitya. Igumbi lokuhlambela elineshawa kunye nesomisi seenwele, iitawuli kunye nelinen yokulala zibandakanyiwe. I-WIFI yasimahla, iNetflix kunye neTV.
Kuba indawo yokuhlala isembindini weDolophu endala, akukho ndawo yokupaka ecaleni kwendlu. Kukho iindawo ezi-2 zokupaka ezihlawulelwayo ezihlawulelwayo ngaphakathi kwemizuzu emi-3 umgama wokuhamba: iParkhaus See kunye neSixeko iParkhaus.
Inqaba entle yeenqaba ngaphezulu kwedolophu, ngaphakathi kwemizuzu emi-4 umgama wokuhamba. Idolophu yakudala ene-traffic encinci kakhulu-isikhumbuzo sembali ekhuselweyo, i-promenade yechibi, iindlela ezahlukeneyo zohambo kunye nokufikelela lula eZurich kwenza ukuba indawo yethu ifanelekele ngakumbi ishishini kunye nabahambi beeholide ngokufanayo.
IRapperswil, idolophu yeerozi ekwiLake Zurich, idibanisa izinto ezibonwayo, ubomi benkcubeko, ukukhwela intaba kunye namathuba ezemidlalo kunye nomoya weholide yeMeditera. Ngumlambo okwiLake Zurich!
I-Rapperswil ikwayindawo yezothutho yengingqi kwaye ifikeleleka ngokulula ukusuka eZurich ngezithuthi zikawonke-wonke (uqhagamshelo lukaloliwe rhoqo ngemizuzu eli-15 imini yonke kude kube sebusuku kakhulu). Isikhululo sikaloliwe sihamba ngemizuzu emi-3 ukusuka kwigumbi lokuhlala. Iirozi zihombisa idyasi yeengalo zedolophu kunye nayo yonke imibala yale ntyatyambo intle iqhakaza kwiigadi ezintathu zeerozi kufutshane nendlu yethu. Ukongeza kwidama lechibi lendlela kunye nomzila, ibhulorho yamaplanga yabahambi ngeenyawo ibonelela ngendlela yokufikelela kwelinye icala lechibi. Le bhulorho yamaplanga ikwayeyona bhulorho inde yeplanga eSwitzerland. I-Rapperswil ikwayindawo yokuqalisa iinkonzo zenqanawa rhoqo kwiLake Zurich, kubandakanywa neziqhushumbisi ezimbini zokwenyani zokubheqa, ukuya eZurich.
IZoo yaBantwana yaseKnie ngumtsalane othile wabantwana kunye nabalandeli besekisi, ekumgama nje wemizuzu eli-10 ukusuka kwigumbi lethu. Kwelinye icala lechibi yiAlpamare, enoluhlu olubanzi lwezilayidi zamanzi kunye nonyango lwempilo.
Umbuki zindwendwe ngu- Imee & Daniel
UImee & Daniel yi-Superhost